अनी त्यस पछी ? लौ न छिट्टो लेख्नुस् शेखर जि !
रमाइलो प्रस्तुती, बांकी भागको पर्खाइमा छु :)
Interesting! Hoping for the next part. & Thanks for sharing.
तपाईको डलर टिप्ने यात्रा निक्कै रमाईलो लाग्दैछ । १ महिना पनि डलर टिप्ने ठाममा नबसेर फेरी यन टिप्ने ठाममा लाग्नु भएछ । ल अरु पनि छिट्टै राख्‍नुहोला। डलर, यन , पाउण्ड र युरोको खेतिको रमाईलो संस्मरण ।
अती मन पर्‍यो शायद आफ्नो जीवन सँग पनि मेल धेर थोर मेल खाने भएर होला अनी वास्तबिकता पनि छ तपाईंको आफ्नो यात्रा भित्र। बाँकी अंश को पर्खाइमा छु।